Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0513 lak
Famerenana an'i Joda rava amin'ny laoniny
Alakamisy 2 May
Niala avy amin’ny sary manjombona maneho ny vahoaka feno fahotana sy ny fitsarana vokatr’izany ny mpaminany ka niroso ho amin’ny fampanantenana be voninahitra ny famerenana amin’ny laoniny amin’ny ho avy (Amôsa 9:11–15). Ny andron’ Andriamanitra, izay voasoritsoritra teo aloha ho andro famaizana (Amôsa 5:18), dia andro famonjena ankehitriny satria famonjena, fa tsy famaizana, no tenin’Andriamanitra farany amin’ny vahoakany. Na izany aza anefa, ny famonjena dia ho tonga aorian’ny famaizana, fa tsy hisolo azy tsy akory.
Eo anivon’ny alahelo sy ny fahasimbana rehetra, dia faranan’i Amôsa amin’ny hafatra mitory fanantenana ny bokiny. Teo am-piatrehana ny mety ho fahalasanan’izy ireo ho babo avy hatrany, ny taranak’i Davida mpanjaka dia nikororosy fahana, latsaka ambany dia ambany tokoa, ka tsy azo nantsoina intsony hoe trano fa trano bongo. Kanefa mbola hohavaozina sy ho tafaray indray eo ambany fifehezan’ny mpanapaka tokana ny fanjakan’i Davida. Any ankoatry ny sisitanin’ny Isiraely, dia hisy firenena hafa hiantso ny anaran’ Andriamanitra ary hianoka amin’ny fitahiany miaraka amin’ny Isiraely. Io fanamarihana mahafaly sy feno fanantenana io no mamarana ny boky.
Ireo mpaminany ao amin’ny Baiboly dia tsy nampianatra fa ny famaizan’Andriamanitra dia nampiharina amin’ny maha-famaizana azy. Ao ambadiky ny ankamaroan’ny fampitandremana dia misy antsom-panavotana. Na dia nananontanona aza ny loza ny amin’ny ho fahalasanan-ko babo, dia nampahery ny vahoaka sisa Andriamanitra tamin’ny fampanantenana famerenana amin’ny laoniny indray ny taniny. Hitondra fifaliana ho an’ny vahoaka sisa ny fanavaozana indray ny fanekena. Ireo izay nandalo ny fitsarana dia hahita an’Andriamanitra miasa mba hamonjy sy hamerina amin’ny laoniny indray.
Inona no fara-tampon’ny fahatanterahan’ny teny fikasan’i Amôsa momba ny famerenana amin’ny laoniny ny vahoakan’Andriamanitra? Jereo ny Lio. 1:32, 33; Asa. 15:13–18.
Mpampianatra Jiosy maro no nihevitra ny Amôsa 9:11 ho teny fikasana momba ny Mesia nomena an’i Abrama, nohamafisina tamin’i Davida, ary nambara manerana ny Testamenta Taloha manontolo. Ilay mpanjaka vaovao avy amin’ny taranak’i Davida dia hanjaka amin’ny firenena maro ho fahatanterahan’ny teny fikasan’Andriamanitra tamin’i Abrama (Gen. 12:1–3). Ny Mesia dia hanjaka na dia amin’ny fahavalony tahaka an’i Edôma aza. Ny zavatra rava izay naverina amin’ny laoniny teo amin’ny vahoakan’ Andriamanitra dia tsy ho rava intsony mandrakizay.
Nantitranterin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny fiavian’i Jesôsy Kristy, Ilay Zanak’i Davida malaza indrindra, ny teny fikasany be voninahitra. Nalain’i Jakôba io andalan-teny avy ao amin’i Amôsa io mba hanehoana fa mivoha ho an’ny Jentilisa ny varavaran’ny famonjena mba handraisany anjara feno amin’ireo tombon-tsoan’ny fanekena nankinina tamin’ny fiangonana. Hatolotr’Andriamanitra ho an’ny Jiosy sy ny Jentilisa, ao amin’Ilay Mesia nampanantenaina, Ilay Solofon’i Abrama sy i Davida, ny fitahiany manavotra.
Ny fahatanterahan’ireo teny fikasana ireo fara-tampony, amin’izay rehetra manaiky izany, na Jiosy na Jentilisa, dia tsy ho hita raha tsy amin’ny fiavian’i Kristy fanindroany. Amin’ny fomba ahoana no ahazoantsika mitahiry izany fanantenana sy teny fikasana izany ho velona fa tsy ho lefy eo anivon’ireo rarin-tsaina afitsoky ny fiainana?